बजेट कार्यान्वयनको सवाल | चितवन पोष्ट
बजेट कार्यान्वयनको सवाल
अहिले अधिकांश स्थानीय निकायले आव ०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले समयमै बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष साउन १ देखि लागू हुने कारण सो अवधिसम्म तीनै तहको सरकारले बजेट अनुमोदनका लागि पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगर र ४६० गाउँपालिका छन् । कुल ७५३ स्थानीय तहले देशको समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकासमा नै अधिक बजेट छुट्याउने गरिएको छ । विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणाली तथा संघीयता लागू भएसँगै हरेक स्थानीय तहको उत्तिकै भूमिका र दायित्व रहेको हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप असार १० गतेभित्रै बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने भए पनि केही स्थानीय तहले विवाद र पर्याप्त तयारी नगर्दा निर्धारित समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । समयमै बजेट ल्याउन सकिएमात्र गाउँ तथा नगरसभाहरुमा पर्याप्त छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा छलफल हुनु बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुनु पनि हो । स्थानीय सरकारको सफलता र असफलतासँग संघीयताले ठूलो अर्थ राख्ने भएकाले बजेटको सही कार्यान्वयन र सदुपयोग हुनुपर्छ ।
संघीयता बलियो हुनु भनेको राज्यव्यवस्था सफल हुनु हो । त्यसैले स्थानीय तहको बजेटको छुट्टै महŒव रहेको हुन्छ । देशले संघीयता धान्न सक्दैन, संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन भन्नेजस्ता जुन खालको आशंका र भ्रम छ, त्यसलाई चिर्नका लागि स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी जनतालाई राहत, विकासको आवश्यकता पूर्ति, सेवा प्रवाहमा सरलता र पारदर्शिता कायम गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व हुनआउँछ । किनभने, अब स्थानीय तहमा संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने आवश्यकता छैन । विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन सके स्वतः जनताले विकासको अनुभूति गर्नेछन् । अहिले स्थानीय बजेटबारे छलफल गर्दैगर्दा र गत वर्षको बजेट के कति खर्च हुनसक्यो ? कति उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च भयो ? गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन सक्यो कि सकेन ? यस्तो विषयमा जनताले जनप्रतिनिधिसँग बहस गर्नुपर्छ । गत वर्षको बजेट औसतमा ५० प्रतिशतमात्र खर्च हुन सक्यो । कति कार्यक्रमहरु त सुरू नै हुन सकेनन् । औसतमा गाउँगाउँमा बाटो खन्ने र पिच गर्नेबाहेक स्थानीय तहमा जनताले अनुभूति गर्ने किसिमका खासै उपलब्धि भएका छैनन् ।
परिवर्तन भनेको बाटो खन्नु र पिच गर्नुमात्र होइन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले सुधारको अनुभूति पनि गर्न सक्नु हो । अहिले स्थानीय तहलाई संघीय र प्रदेश सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरेका छन् । जसमा स्थानीय तहले उठाउने राजस्वसमेत जोडेर कुल बजेट प्रस्तुत हुन्छ । खर्चको आवश्यकताबमोजिम संघीय सरकारको स्वीकृतिमा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋणसमेत उठाउन सक्ने प्रावधान छ । बजेट कार्यान्वयनमा जनताको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भएकाले स्थानीय तहमा हुने पूर्वाधार विकासका साथै सेवा प्रवाह र आपूर्ति तथा गुणस्तरलगायतका हरेक गतिविधिप्रति निरन्तर अनुगमन र खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ । अहिले सबैभन्दा बढी अनियमितता पनि स्थानीय तहमै हुने गरेका छन् । बजेट खर्च गर्ने नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेटको दुरूपयोग हुनुहुन्न । समुदायको हित र विकासमा बजेटको सही सदुपयोग हुन सक्यो भनेमात्र जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्छन् । प्राथमिकताका आधारमा बजेट कार्यान्वयन हुनसके उपलब्धि पनि छिटो हासिल हुन्छ । बजेट घोषणा गर्न बाँकी रहेका स्थानीय सरकारले विवाद छाडेर संघीयताको सही अभ्यासका लागि समयमै बजेट ल्याउनु जरूरी देखिन्छ ।